Maamulka Deegaan katirsan gobolka Galgaduud oo Amar ku rogay Hubka Sharcidarada ah – SBC
Maamulka Deegaan katirsan gobolka Galgaduud oo Amar ku rogay Hubka Sharcidarada ah
Maamulka Degmada Balambal ee gobolka galgaduud ayaa deegaankaasi maanta ku soo rogay Amar lagu mamnuucayo Hubka sharci darada ah ee ay dadku la dhexmarayaan gudaha degmada ka dib xaalado amaan oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo kordhay deegaankaas.
Hareeri Xasan Barre oo ah gudoomiyaha maamulka Ahlusuna ugu magacaaban degmadaasi Balambal ayaa u sheegay saxaafada in maamulkiisu talaabo ka qaadi doono qofkii lagu qabto isagoo magaalada la dhexmaraya hub.
“Qofkii lagu qabto qori ama hub kale oo dhemaraya gudaha magaalada, waalaqabanayaa hubka waalaga qaadayaa, sharciga waxa uu qabana waa la marinayaa” waxaa sidaasi yiri gudoomiyaha balambal
Mamnuucista Hubka in lala dhexmaro gudaha degmada Balambal waxa ay ka dambeysay markii ay soo kordheen weeraro shaqsi shaqsi ah oo ku saleysan aanooyin kuwaas oo ka dhaca gudaha inta badan gudaha deegaanka .
Dhacdadii ugu dambeysay waxaa ku dhintay hal nin halka tiro kale oo ilaa 4 qof oo dhalinyaro u badanna ay ku dhaawacmeen, ka dib markii nin ku hubeysan hubkak fudud uu rasaas hubiyay isagoo aano qabiil awgeed ku beegsanaya nin uu baadigoob ugu jiray, waa sida ay hadalka u dhigeen laamaha Amaanka deegaankaas oo faah faahin ka bixinayay ka dib markii ay gacanta ku soo dhigeen ninka falka geystay.
Awaamiirta maamulkan uu soo saaray ayaa la filayaa in ay dhaqan gasho inkastoo gobolka Galgaduud ay ku badan tahay dhacdooyinka aanooyinka ah ee ka dhaca gudaha degmooyinkiisa.